Imandarmedia.com.np: उसको वीर्य स्खलन हुन तीनचार घण्टा लाग्छ ! म सक्दिन.... (डाक्टर पटेलको सुझाबसहित)
Lifestyle » उसको वीर्य स्खलन हुन तीनचार घण्टा लाग्छ ! म सक्दिन.... (डाक्टर पटेलको सुझाबसहित)
उसको वीर्य स्खलन हुन तीनचार घण्टा लाग्छ ! म सक्दिन.... (डाक्टर पटेलको सुझाबसहित)
माथि सोधिएको प्रश्न एक युवतीको मात्र नभएर कयौं महिला साथीहरुको पनि हुनसक्छ । त्यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै यसबारे महिला डा. प्रनिता पटेलको सुझाब यस्तो छ ।
अर्को कुरा तपाईं प्रिम्याच्योर इजाक्युलेसनबाट ग्रस्त हुनुुहुन्छ भने स्प्रे प्रयोग गर्दा खासै फरक पर्दैन । तर, रमाइलोका लागि स्प्रे प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो यौन साथीलाई दुःख त दिनु हुन्छ नै, तपाईं आफूले पनि खासै आनन्द लिन सक्नुहुन्न । साथै, तपाईंको साथी गर्भवती हुनुहुन्छ, तपाईंलाई मुटुसम्बन्धी रोग या उच्च रक्तचाप छ भने यो प्रयोग गर्नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा यसले नराम्रो असर गर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा